Building Construction and Infrastructure: ASHRAE Guide for Buildings in Hot & Humid Climage မိတ်ဆက်။
ASHRAE Guide for Buildings in Hot & Humid Climage မိတ်ဆက်။
ပူပြင်းပြီး Humidity များတဲ့ ရာသီဥတု ရှိတဲ့ ဒေသတွေ က အဆောက်အအုံ တွေ ကို ဒီဇိုင်း လုပ်တဲ့ အခါ Challenges က အေးအောင် လုပ်ရုံတင် မဟုတ်တော့ ပါဘူး။ စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းမှု Humidity နဲ့အတူကပ်ပါလာတဲ့ ပြဿနာ တွေ ကို ပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရပါတယ်။ ဟိုတယ်ခန်း က မွေ့ရာအောက်မှာ ရေဝပ်နေတာ၊ wall paper နောက်မှာ ရေခိုနေတာ၊ မှိုစွဲ နေတာ၊ ကြမ်းပိုးထူတာ၊ ဆွေးမြေ့တာ၊ အောက်သက်သက် အနံ့ ဆိုးထွက်နေတာ စတဲ့ ပြဿနာ ပေါင်းစုံ ပါ။ အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေ အတွက် ဒီ အကြောင်းအရာ က အရေးပါ ပါတယ်။
စာရေးသူ တို့ အနေနဲ့ ဒီ ဒေသတွေ အတွက် ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ အခါ humidity ကို အထူး သတိထား ဂရုစိုက် ရလေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အတိမ်းအစောင်း သိပ်မခံ တဲ့ High-Tech Production Factories တွေ မှာ ပိုပြီးဂရုစိုက် ရပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ကို လေ့လာလည်း လေ့လာ အသုံးလည်း ချ နေစဉ် မှာပဲ Seminar တစ်ခု တက်ဘို့ အခွင့်အရေး ရတာ နဲ့ သွားတက်ဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ “New & Existing Buildings in Hot and Humid Climates” ဖြစ်ပါတယ်။ ဟောပြောသူ က တော့ ASHRAE president 2006-07 တာဝန် ယူခဲ့ဘူးသူ Mr. Terry E. Townsend, (P.E., Fellow ASHRAE) ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် က ဒုတိယအကြိမ် ဖြည့်စွက် ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေတဲ့ “The ASHRAE Guide for Buildings in Hot & Humid Climates” ကို အခြေခံပြီး ဟောပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာကတော့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ BCA Acamedy မှာပါ။ ဒုတိယ ပိုင်းမှာ တော့ NUS က Professor တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Professor S.K. Chou ကနေပြီး “Enhancement of the Envelope Thermal Transfer Value Criterion for Improved Energy Performance of Buildings” အကြောင်းကို ဆက်လက် ဟောပြောပါတယ်။ (ဒီအကြောင်းကိုတော့ နောက်တစ်ပါတ် မှာ ဆက်လက် တင်ပြပေးပါမယ်။)
ဒီတစ်ပါတ် မှာ တော့ ဒီလို ပူပြင်းစွတ်စို တဲ့ ရာသီဥတု ရှိတဲ့ ဒေသ က အဆောက်အအုံ အားလုံး အတွက် အခြေခံ စဉ်းစားရမဲ့ အချက် တွေ ကို ခြုံငုံ တင်ပြမှာပါ။
North America မှာ mold (မှိုတက်တဲ့မှို) ကို ရှေ့နေတွေ ပေးထားတဲ့ နာမည် က ငွေ (money) ပါတဲ့။ ဆိုလိုတာ က မှိုတက်တာ တွေ့လို့ ကတော့ သူတို့ ဂွင်၊ ငွေတွင်း နဲ့ တူတဲ့ အမှုတွေ ရမှာ ဖြစ်လို့ ပါတဲ့။
ပထမ အကြိမ်ရိုက်နှိပ် စဉ် က စာအုပ် ကိုတော့ ဖတ်ရှုလေ့လာ ဘူးပါတယ်။ လက်ရှိ ဒုတိယ အကြိမ် မှာတော့ ပထမ အကြိမ် ထက် သုံးဆလောက် ပိုထူလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ဘို့ အခွင့်အရေး တော့ မရသေး ပါဘူး။
ဒီစာအုပ်ရဲ့ အညွှန်း keyword တွေ ကတော့ Moisture (အစိုဓာတ်), mold (မှိုတက်), humidity (စိုထိုင်းဆ), dehumidification (စိုထိုင်းဆ လျှော့ချခြင်း), sustainability (ရေရှည်တည်တံ့ နိုင်မှု), energy reduction (စွမ်းအင်အသုံး လျှော့ချခြင်း) , moisture management (စွမ်းအင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း), hot and humid climates (ပူပြင်းစွတ်စိုသော ရာသီဥတု) တွေဖြစ်ပါတယ်။
The expanded second edition of The ASHRAE Guide for Buildings in Hot and Humid Climates triples the size of this popular reference, adding information on building enclosures, dehumidification, sustainability, mold avoidance, energy reduction, and much more—all tightly focused on the needs of owners, architects, and engineers who build and manage buildings in hot and humid climates. The book includes six chapters that discuss critical crosscutting issues for architecture, engineering, and building management along with eleven chapters of detailed and practical solutions to everyday problems in each area. This expanded second edition providesarichly illustrated summary of the state of the art in building science, moisture management, and techniques for reducing energy consumption in hot and humid climates, all based on real-world field experience as well as on recent ASHRAE research. The expanded second edition is written and illustrated by Lew Harriman, the lead author of ASHRAE’s well-known Humidity Control Design Guide, and by Joe Lstiburek, ASHRAE Fellow and the author of the irreverent and popular Building Science column in the ASHRAE Journal.
Related Products: Humidity Control Design Guide
Keywords: moisture, mold, humidity, dehumidification, sustainability, energy reduction, moisture management, hot and humid climates
Author: Lewis G. Harriman, III, and Joseph W. Lstiburek
Sponsor: TC 1.12, Moisture Management in Buildings
Lstiburek's Guide to Solving IAQ Problems
ဒီဒေသတွေ မှာ ရှိတဲ့ အဆောက်အအုံ တွေ မှာ တွေ့ရလေ့ ရှိတဲ့ အဓိက ပြဿနာ က တော့ IAQ (Indoor Air Quality) လို့ခေါ်တဲ့ အဆောက်အအုံ အတွင်း က လေရဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု အရည်အသွေး ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဘို့ပါ။ IAQ မကောင်းလို့ ဖြစ်လာမဲ့ ပြဿနာ တွေ ကလည်း အများကြီးမို့ပါ။
ဒီ ဒုတိယ အကြိမ် စာအုပ် မှာ ပူးတွဲရေးလာတဲ့ စာရေးသူ အသစ် Lstiburek က IAQ ပြဿနာတွေ ကို ဖြေရှင်းဘို့ လမ်းညွှန်ချက် အချို့ပေးထားပါတယ်။
If it smells – it probably is bad
အနံ့ရတယ် ဆိုရင်တော့ အဲဒါမကောင်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Not everything that is bad smells
အားလုံးက အနံ့ဆိုးတာ တွေချည်း မဟုတ်ပါဘူး။ (Carbon monoxide, carbon dioxide, ozone လိုဓာတ်ငွေ့တွေ က အနံ့အသက် မရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေပါ။)
Vent combustion sources
မီးလောင်ပေါက်ကွဲ မှုရှိတဲ့ မီးဖို၊ Dryer, Engine အစရှိတဲ့ combustion sources တွေ ကနေ vent လို့ခေါ်တဲ့ လေကို အဆောက်အအုံ ပြင်ပကို ထုတ်လွှတ် ပေးဘို့။ မဟုတ်ရင် လေထဲကို မီးလောင်ပြီး ထွက်လာတဲ့ COx, NOx နဲ့ အခြား Pollutant တွေ အခန်းထဲ စုလာပါလိမ့်မယ်။
Constructatight enclosure
အဆောက်အအုံ ရဲ့ အကာအရံ enclosure တွေက လေလုံနေဘို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ moisture များတဲ့ အပြင် ကလေတွေ အထဲ ကို Infiltrate (စိမ့်ဝင်) မလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Keep things form getting wet, hot or exposed to UV. Isolate those that do from occupants.
အရာဝတ္တုတွေ ကို ရေမထိအောင် (မစိုစွတ် မနေအောင်)၊ အပူ နဲ့ UV တွေ မထိအောင် ထားပါ။ ဒါတွေထိမဲ့ အရာဝတ္တုတွေ ကိုတော့ လူတွေနဲ့ သီးသန့် ဖြစ်အောင် ခွဲထားပါ။
အခန်း ထဲမှာ ရှိတဲ့ Humidity ကိုထိန်းပါ။ ဒီ Humidity ဆိုတဲ့နေရာ မှာ Space Humidity တင်မက Surface Humidity ပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ပေးရပါမယ်။
Maintain “stinky places/ things” (eg. Bathrooms, kitchens, elevator shafts & trash chutes) underanegative pressure.
အနံ့မကောင်းတဲ့ နေရာ၊ ပစ္စည်းတွေ ရှိတဲ့ နေရာ (ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ မီးဖိုချောင်၊ elevator shafts နဲ့ အမှိုက်ပစ်တဲ့ trash chutes, etc.) တွေကို မယ်။ (လုံလောက်တဲ့ Exhaust ပေးခြင်းဖြင့်) negative pressure မှာ အမြဲရှိနေအောင် ထိန်းထားပေးပါ။
Keep things & spaces clean
နေရာ နဲ့ ပစ္စည်းတွေ ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားပေးပါ။
Filter for people not just equipment
စက်ပစ္စည်းတွေ ကို သာမဟုတ် ပဲ လူတွေ အတွက် လည်း လေကို သန့်စင် အောင် Filter စစ်ပေးပါ။
Ventilate for people, not just the building (Source control ventilation will handle the building)
အဆောက်အအုံ အတွက် သာမဟုတ်ပဲ လူတွေ အတွက်ကိုလည်း ventilate (လေသန့်သွင်း) ပေးပါ။ အဆောက်အအုံ အတွက် Source control ventilation က တာဝန်ယူ ပါလိမ့်မယ်။
Don't do stupid things to your building
သင့်အဆောက်အအုံ အတွက် မိုက်မဲတဲ့ အပြုအမူတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
ဒီ အပူပိုင်းဒေသ တွေမှာ Humidity တက် လာတာနဲ့ အိုက်စပ် မှု က Occupant’s Comfort Level ကျဆင်းလာတာ ကို အဓိကတွေ့ရပါတယ်။
Thermally Comfort ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အေးစိမ့်နေတာ ကိုဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Thermal Comfort အကြောင်းကို အရင် HVAC Systems: Introduction to Design မှာ တင်ပြခဲ့ ပါတယ်။ ပိုပြီး အသေးစိတ် သိချင်ရင် မှီငြမ်းစရာ ကတော့ ASHRAE Standard 55: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy ပါ။ Hot & Humid Climate မှာ Thermal Confort ကို ဘယ်လို ပိုကောင်းအောင် လုပ်မလဲ ဆိုတာ ကို အခု ဆက်လက် တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိက အကြံပေးချက် တွေ ကတော့
အပူကူးမှု နည်းအောင် ကောင်းကောင်း Insulation လုပ်ထားတဲ့ enclosure တွေကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပါ၊ ဆောက်လုပ်ပါ။ နေ က လာတဲ့ Solar Heat အပူနဲ့၊ Glare (မျက်စိ ကျိန်းစေတဲ့ အရောင်တောက်တောက်) တွေ ကို သက်သာရအောင် ကို ပြူတင်းပေါက်တွေ မှာ exterior shading တပ်ဆင်ပေးပါ။ ပြူတင်းပေါက် အားလုံး ( အထူးသဖြင့် အနောက်ဘက် မျက်နှာမူထားတဲ့ ပြူတင်းပေါက်တွေ) ရဲ့ အရွယ်အစား ကိုလျှော့ချပါ။
အခန်းထဲ က အပူချိန် ကို 23.3°C (74°F) အထက်နဲ့ 26.1°C (79°F) အောက် ကြားရအောင် ထားပါ။
ဒီ အပူပိုင်းဒေသ တွေမှာ Humidity တက် လာတာနဲ့ အိုက်စပ် မှု က Occupant’s Comfort Level ကျဆင်းလာတာ ကို အဓိက တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်
Indoor Dew Point ကို 12.8°C (55°F) အောက်မှာ ရှိနေအောင် ထိန်းထား ပေးပါ။
Air Handling systems တွေကို လျှော့သုံးမဲ့ အစား ပိုသုံးပါ။
ဒါမှ လိုအပ်တဲ့ different/dynamic changing internal heat loads တွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ကိုက်ညှိပေး ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက AHU တစ်လုံးတည်း နဲ့ နှစ်ထပ်ပေးမဲ့ အစား တစ်ထပ်ကို တစ်လုံး ပေးခဲ့ရင် ပိုကောင်း ပါလိမ့်မယ်။ လေကို ပို့ရတာထက် ရေ (Chilled Water) ကို ပို့ရတာ က ပိုလွယ်ပြီး ပိုလည်း သက်သာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုမိုရိုးရှင်းပြီး operate လုပ်ဘို့အတွက် ပိုလည်းသက်သာ၊ ပိုလည်း စိတ်ချ ရပါလိမ့်မယ်။
အနည်းဆုံး တစ်ထပ် ကို AHU တစ်လုံး ပေးပါ။
Thermal Comfort ရဘို့အတွက် အခြေခံ အချက်များ
Shaded Windows= Improved Comfort & Reduced Glare
Radiant Heat ဖြာကူးမှု နည်းပါးပါတယ်။
Glare နည်းလာတာနဲ့ မျက်လုံး နဲ့ မျက်နှာပေါ် ကကြွက်သား တွေ တင်းမာ ရှုံ့တွ တာကို လျှော့ချပေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ အမြင်ကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။
Peak Load ကိုလည်း လျှော့ချ ပေးနိုင် ပါတယ်။
Less East & West Glass= Better Comfort
တိုက်ရိုက်ကျလာတဲ့ နေရဲ့ Solar Load အများအပြား စုဝင်လာတာ ကို ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အာရှသား အများစုက မနက်ခင်း ခပ်စောစော နေ ကိုတော့ နှစ်သက်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေမြင့်လာတာ နဲ့ ဝင်လာမဲ့ အပူ ကလည်း များလာပါလိမ့်မယ်။
Cooling systems တွေရဲ့ အရွယ်အစား၊ ရှုတ်ထွေးမှု နဲ့ Operating cost ကို လျှော့ချ ပေးနိုင် ပါတယ်။
Comfort Unlikely in 'Glass Boxes'
မှန်တွေ က well insulated wall ထက် ၅ ဆ လောက် အပူပို သွင်း ပေးပါတယ်။
သက်တောင့်သက်သာ မရှိလို့ ငြီးတွား မဲ့ Comfort complaint probability ပိုများနိုင်ပါတယ်။
Mechanical Systems တွေ ရဲ့ Construction, Operating and Maintenance Cost ပိုများပါတယ်။
Tight, Well-constructed Exterior Walls Avoids Sharp Changes in Interior Conditions
လေလုံအောင် သေချာ ဆောက်ထားတဲ့ နံရံတွေက အခန်းထဲက အခြေအနေ ကို ရုတ်တရက် မပြောင်းလဲ စေပါဘူး။
အခန်းထဲ က အပူချိန် အပြောင်းအလဲ နည်းစေ ပြီး သမမျှတ ပါတယ်။
Infiltration လေစိမ့် ဝင်တာ နဲ့ mold မှိုတက်တဲ့ ပြဿနာ တွေ ကို လျှော့ချ နိုင်ပါတယ်။
High Ceilings and Personal Fans Allow Low-cost Comfort
Temperature Stratification ကိုရနိုင်ပါတယ်။
Ideal Ceiling Height = 3.65m
Ideal Fan Blade Height = 3.0m
One Fan per Floor = Better Comfort + Simpler Systems
အနည်းဆုံး တစ်ထပ် ကို Fan (AHU) တစ်လုံး ထားပေးခြင်း အားဖြင့် Comfort ကိုပိုကောင်း စေပြီး Systems တွေ ကိုလည်း ပိုမို ရိုးရှင်း စေပါတယ်။
Occupancy Schedules နဲ့ Heat Load တွေ နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး ပေးနိုင်ပါမယ်။
Multiple Area အတွက် လိုအပ်တဲ့ လေအမြောက်အများ ကို ပေးရလို့ ကုန်ကျမဲ့ Energy Cost ကို သက်သာ စေပါမယ်။
လူတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင် မှု ကို လိုက်ပြီး HVAC Design ကိုလုပ်ပါ။
Indoor Design ကို 24ºC ထားမဲ့ အစား 26ºC ထားပြီး Dew point ကိုတော့ 12.8°C (55°F) အောက်မှာ ရှိအောင် လုပ်ပါ။
Equipment တွေရဲ့ Cooling Capacity ကို Multiple-stages အဆင့်ဆင့် ထားပါ။ (သို့မဟုတ်) modulating capability ထည့်သွင်းပေးပါ။
Supply Air Stream ရဲ့ Noise နဲ့ Chilling Effect ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါ။ Occupant တော်တော်များများ က (သူတို့ ကိုယ်တိုင် Control မလုပ်နိုင်ပဲ) သူတို့ အပေါ် Cold Air Direct Blow လုပ်တာ ကို မကြိုက်ကြ တာကြောင့်မို့ပါ။
Dry Ventilation Air Helps Avoid Temperature Swings
Dedicated Outside Air System (DOAS) ဆိုတာ က လူတွေ နဲ့ နေရာ အလိုက် လိုအပ်တဲ့ Ventilation Air ကို အခြား AC Equipments တွေ နဲ့ မရောပဲ သီးသန့် သန့်စင် ပို့လွှတ် ပေးတဲ့ စနစ် ကိုခေါ်တာပါ။Dew point ကိုတော့ 12.8°C (55°F) အောက်မှာ ရအောင် Treatment လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ Filter နဲ့လည်း လေကို စစ် ပေးရပါမယ်။
Cooling Equipment တွေ က လည်း humidity ကိုဖယ်ဘို့ အအေးဓာတ် ကို အပို ချပစ်ရမဲ့ အစားSensible Load ကိုပဲ ဂရုစိုက် ရပါတော့မယ်။
အခန်းထဲ မှာ မှိုတက်တဲ့ ပြဿနာ ကို လျော့ပါးစေ နိုင်တာမို့ US မှာ Dedicated Outdoor Air Dehumidification System တွေ က ရေပန်းစား လာပါတယ်။ မှို နဲ့ ဘက်တီးရီးယား ပွားတာ ကို ဟန့်တားနိုင်ဘို့ နဲ့ လူတွေ ရဲ့ နှစ်သိမ့်မှု ကို ပေးနိုင်ဘို့ အတွက် Federal Buildings တွေ မှာ Dedicated Ventilation dehumidification equipment တွေသုံးဘို့ 2003 ခုနှစ်ထဲ က ပြဌာန်း ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အဆောက်အအုံ တွေ မှာ အခန်းထဲ က လေကို ရုံးသူ၊ ရုံးသား တွေကနေ ထုတ်လွှတ်လာမဲ့ humidity ကို စုတ်ယူ ရင်းနဲ့ Dew point ကို 12.8°C (55°F) အောက် မှာ ထိန်းထားနိုင်ဘို့ အတွက် အပြင်က O/A လေကို Dew point 10.0°C (50°F) အောက် ရအောင် အမြဲတမ်း Treatment လုပ်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Constantly Cold Coil also Dry Air Effectively
Cooling Coil or Desiccant Dehumidifier controlled withahumidistat vs thermostat
VAV Systems with Constantly Cold Coil အတွက်
Supply Air Dew Point is Low enough (12.8°C (55°F))
Supply Air Dew Point က သတ်မှတ်ထားတဲ့ Indoor Dew Point အောက်မှာ ရောက်နေရင် Coil stays cold ထားရပါမယ်။
အအေးလွန် သွားလို့ လိုအပ်လာတဲ့ re-heat ကို waste heat (refrig condenser or heat recovery wheel) ကနေယူပါ။
Drier Air Expands the Comfort Range in Mixed Uses
လူတွေ ကို ရံဖန်ရံခါ မသက်မသာ ဖြစ်စေတာ က အပူ ကြောင့်မဟုတ်ပဲ Humidity ကြောင့် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အိုက်စပ်စပ် ကြီးဖြစ်နေတာပါ။ လေကို ပိုပြီး ခြောက်သွေ့အောင် လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီလို ဒုက္ခ မျိုး ကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
Capacity Modulation Avoids Sharp Changes – Stop Overshooting Desired Conditions
Stop Oversizing Cooling Equipment - Size at or under "Peak Load"
ဒီအကြောင်းကြောင့် ပူအိုက်တဲ့ ရာသီဥတု မှာ အနွေးထည် ဆောင် ဘို့ အတွက် ဖြစ်စေတာပါ။ Peak Load ဆိုတာက Operating hour အချိန်ရဲ့ 99% ကျော်မှာ လိုအပ်တာထက် ပိုနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် Designer က လိုရမယ်ရ ဆိုပြီး 10-20% လည်း ထပ်ထည့် နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို အပိုထည့်ထားတဲ့ အတွက် လိုချင်တဲ့ temperature ကိုကျော်ကျသွားတတ် တာ ကို ထိန်းဘို့ မလွယ်တော့ ပါဘူး။ ရလဒ် အနေနဲ့ ကတော့ အရမ်းပူတာ နဲ့ အရမ်းအေးတာ ကြား အလျင်အမြန် ပြောင်းနေတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် သင့်တော်ရုံ ပဲ ရွေးခဲ့မယ် ဆိုရင် Cost ကို ချပေးနိုင်ရုံ သာမက ပိုပြီးလည်း comfort ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Variable-Speed Motors (or) Multiple Stage of equipment Capacity
အပြောင်းအလဲမြန်စေတဲ့ ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက် (စက်တွေကို) လုပ်ရမဲ့ အစား လိုအပ်တဲ့ Capacity ရအောင် ညင်ညင်သာသာ လေး ပြောင်းပေး၊ ညှိပေး နိုင်ပါတယ်။ ဒါက Comfort ကို အများကြီး ပိုကောင်း စေရုံသာမက ဈေးလည်းချိုမဲ့ နည်းလမ်းပါ။
Split Cooling Load between several pieces of equipments (vs) One Large Piece /component
Equipment စက်ကြီးအကြီး တစ်ခုအစား အနေတော်လေးတွေ အချို့ကို ရွေးတဲ့အခါ Load အတက်အကျ ကိုလိုက်ပြီး သင့်တော်သလို လိုက်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းကတော့ equipment နဲ့ နေရာပိုလိုတာ မို့ အခြားရွေးစရာတွေ နဲ့ယှဉ်ရင် ဈေးအကြီးဆုံး most expensive ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ပိုလာမဲ့ နည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ Comfort ကိုပိုကောင်းစေမယ်။ Energy use လည်း အတော် နည်းသွားမယ်။ ထိန်းသိမ်းစရိတ် ပိုသက်သာစေမဲ့ အပြင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (reliability) လည်း ပိုကောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Equipment စက်ကြီးအကြီး တစ်ခုအစား အနေတော်လေးတွေ အချို့ကို ရွေးတဲ့အခါ Load အတက်အကျ ကိုလိုက်ပြီး သင့်တော်သလို လိုက်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းကတော့ equipment နဲ့ နေရာပိုလိုတာ မို့ ကုန်ကျစရိတ် ပိုလာမဲ့ နည်းပါ။ ဒါပေမဲ့ Comfort ကိုပိုကောင်းစေမယ်။ Energy use လည်း အတော် နည်းသွားမယ်။ ထိန်းသိမ်းစရိတ် ပိုသက်သာစေမဲ့ အပြင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (reliability) လည်း ပိုကောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ensure thatacomponent in system responds toahumidstat control of dew point conditions
Cooling System မှာဘာပဲဖြစ်နေနေ အခန်းထဲ က Humidity ကို 12.8°C (55°F) အောက်မှာ ထိန်းထား နိုင်ဘို့ အတွက် Humidistat ကို respond လုပ်နိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု သီးသန့် ထည့်ပေးထားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Dedicated humidification equipment မပါခဲ့ရင် အခန်းထဲ က Heat Load နည်းလာတာ နဲ့ အမျှ အအေးလွန်တာ ကို ထိန်းရင်း နဲ့ Humidity က မသက်မသာ ဖြစ်လောက်အောင် မြင့် တက်လာ နိုင်ပါတယ်။
Higher Velocity VAV Diffusers Avoid "Cold Air Dumping" (use with non-sleeping areas)
Low velocities cause " Cold Air Columns"
High Velocity နဲ့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ Loud Diffusers တွေက အိပ်ခန်းတွေ အတွက် မသင့်တော် ပေမဲ့ non-sleeping area တွေ မှာ Comfort နဲ့ Productivity အတွက် ကောင်းကျိုး ပေးနိုင်ပါတယ်။
အသံငြိမ် နေအောင် ရွေးချယ်ထားတဲ့ Diffusers တွေမှာ Peak Design Flow ကို အခြေခံ ထား လေ့ရှိကြတာ မို့၊ Low Load Condition မှာ Air Flow က အရမ်းနည်းနေ တတ်ပါတယ်။ အဲဒါ က အခန်းထဲ က လေနဲ့ သမ Mixed ဖြစ် ရမဲ့ အစား "Cold Column" ဖြစ်စေပြီး Occupant ဆီထိ ရောက်နိုင်တာ မို့ Comfort ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
Benefit to having "White Noise" generation
ရုံးခန်းတွေ၊ ကျောင်းတွေ မှာ High Velocity Diffuser က ထွက်လာ တဲ့ အသံတွေ ကြောင့် Low-Level "White Noise" ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ တိတ်ဆိပ် လွန်း လို့ သူများတွေ ပြောဆိုနေ သမျှ အကုန် သေချာ ကြားနေရလို့ စိတ်ရှုတ် နေရမဲ့ အစား ကိုယ့်အလုပ်မှာ ကိုယ် အာရုံ စိုက်လာနိုင်မဲ့ လူမှုရေး အကျိုးကျေးဇူး ကို ပေးပါတယ်။ လုံးဝ တိတ်ဆိပ်နေ တာ က အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် မကောင်းပါဘူး။
Managing Ventilation Air
သင့်တော်တဲ့ Outdoor Air (O/A) ပမာဏ ကို လူတွေ အသက်ရှု မဲ့ Breathing Zone အထိ ရောက်အောင် ပို့ပေးရပါမယ်။ Breathing Zone ဆိုတာ ကတော့ လူတွေ ရှိတဲ့ အခန်း တွေထဲမှာ ကြမ်းပြင် အထက် 3" နဲ့ 72" ကြား (75 & 1800mm)၊ နံရံ (သို့) Fixed air-conditioning equipment ကနေ2ft. (600mm) ထက်ဝေးတဲ့ နေရာလို့ သတ်မှတ် ပါတယ်။
Ventilation Air က သန့်ရှင်းရမယ်။ ခြောက်သွေ့ရမယ်။ အမှိုက် နဲ့ Pollutants တွေ ကင်းစင်ရပါမယ်။
အဓိက အကြံပေးချက်တွေ ကတော့
Ventilation System ကို ASHRAE Standard 62.1: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality နဲ့ ASHRAE 62.1 User Manualကို သုံးပြီး size လုပ် ရွေးချယ်ပါ။
အပြင်က လေ (O/A) ရဲ့ Dew point က 12.8°C (55°F) ထက်ပိုနေရင် Dehumidify (Dry) လုပ်ပေးပါ။
အနည်းဆုံး MERV-8 အဆင့်ရှိတဲ့ Filter နဲ့ O/A ကို စစ်ပေးပါ။ အဆောက်အအုံ က အမှုန်အမွှား များတဲ့ နေရာ မှာ တည်ရှိနေခဲ့ရင် MERV-11 အဆင့်ရှိတဲ့ Filter နဲ့ စစ်ပေးပါ။ အိုဇုန်း ပါဝင်နှုန်း များတဲ့ လေဆိုရင်တော့ Carbon Filter (သို့) အခြားသင့်တော် တဲ့ နည်းနဲ့ အိုဇုန်း ကို စစ်ပေးပါ။
O/A ကို လိုအပ် တဲ့ ပမာဏ အတိုင်း ရအောင် Modulate (ထိန်းညှိ) ပေး ပါ။ Energy Cost ကိုလည်းထိန်း၊ လေကောင်းလေသန့်လည်း ပေးနိုင်ဘို့ အတွက် လူဦးရေ အနည်းအများ ကိုလိုက်ပြီး Ventilation Amount ကို ပြောင်းပေးနိုင်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရှိနိုင်မဲ့ လူဦးရေ ကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းပြီး Timer နဲ့ ပြောင်းတာဖြစ်ဖြစ်၊ CO2 Sensor ထည့်ပြီး ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Motion sensor နဲ့ လူရှိမရှိ sense လုပ်ပြီး ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်သလို modulate လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် အလဟဿ ဆုံးရှုံးသွားမဲ့ Waste Energy တွေကို Recover လုပ်ပါ။ Cold & dry ဖြစ်နေတဲ့ exhaust air တွေ က နေ recover လုပ် ယူနိုင် ပါတယ်။ Sensible Heat ကိုပဲ Recover လုပ်နိုင်တဲ့ Heat Exchanger တွေ ရှိသလို Sensible ရော Latent ပါ recover လုပ်နိုင်တဲ့ Energy (Enthalpy) Wheel တွေ လည်း ရှိပါတယ်။
Dehumidification and Air Cleaning
Ventilation Air ကို Condition လုပ်ရတာ က ဈေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပူနွေးစွတ်စို တဲ့ ရာသီဥတု ရှိတဲ့ ဒေသတွေ မှာ ပါ။ ဒီဒေသ တွေ မှာ အခန်းထဲ က Pollutant တွေ ကို Dilute ဖြစ်ဘို့ အပြင်ကလေ သွင်းရုံ သက်သက် နဲ့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တော်အောင် သန့်စင် ပြီး dry မလုပ်ခဲ့ ရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကို တောင် ပိုဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဆောက်အအုံ ပိုင်ရှင်တွေ အတွက် အပြင်က လေကို သန့်အောင် စစ်ဘို့၊ ရေငွေ့ ဖယ်ဘို့ နဲ့ Breathing Zone အရောက် ပို့ဘို့ အတွက် က ကုန်ကျစရိတ် သက်သာလှတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီဒေသ တွေ က အဆောက်အအုံ တွေ မှာ Ventilation Air က Humidity Load ရဲ့ အချိုးအစား အတော်များများ ကို ယူထားပါတယ်။ အဆောက်အအုံ အများစု မှာ Total peak humidity load ရဲ့ 60% လောက်ကို ယူထားတာ ပါ။ ဒီ အပူပိုင်းဇုန် တွေ မှာ တစ်နှစ်လုံး လိုလို humidity ကလည်း များတတ်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်း မှာ တောင် အပြင်က လေရဲ့ Dew point က လိုချင်တဲ့ 12.8°C (55°F) ထက် ပိုနေတတ် ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အငြင်းပွားစရာ အခြေအနေ တွေ ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဘယ်လောက် နှုန်းနဲ့ ပေးရမယ် ဆိုတာ ကို အတိအကျ သတ်မှတ် ဘို့ ကိစ္စ က လည်း HVAC Engineer တွေ အတော် သည်းညည်းခံ ရတဲ့ အငြင်းပွားမှု တွေ ပါ။
ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် DOAS သုံးဘို့ တိုက်တွန်းတာပါ။ Federal Buildings တွေ မှာ Dedicated Ventilation dehumidification equipment တွေသုံးဘို့ 2003 နဲ့ အပြင်က O/A လေကို Dew point 10.0°C (50°F) အောက် ရအောင် အမြဲတမ်း Treatment လုပ်ဘို့ လိုအပ်တဲ့ အကြေင်း အထက်မှာ တင်ပြခဲ့ ပါတယ်။
Designer အနေနဲ့ DOAS ကို မသုံးဘူး ဆိုရင် humidity control က cooling system ထဲမှာ ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမဲ့ အချက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါက Designer ရဲ့ ရွေးချယ် မှု ဆိုခဲ့ ရင် Cooling systems ကို အခြားပုံမှန် Cooling systems တွေ နဲ့ မတူပဲ သေချာ ဒီဇိုင်း လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ လေက Cooling လုပ်ဘို့ မလိုခဲ့ ရင်တောင် မှ dry လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ် မျိုးကို ဒီဇိုင်း လုပ်ရ ပါမယ်။ အခန်းထဲ မှာ Absolute Humidity (or Dew Point Temperature) တက်လာရင် ထိန်းနိုင်ဘို့ က Humidistat ကို respond လုပ်နိုင်တဲ့ စနစ်တွေ ထည့်သွင်းထားဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် energy saving အတွက် higher thermostat setting လုပ်ထားတဲ့ အခါ cooling systems သက်သက်တွေ ပဲ သုံးခဲ့ ရင် အခန်းထဲ မှာ humidity တက်လာပြီး မှိုတွေ ပွားလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခု ကတော့ အမှုန်အမွှား တွေ ကိုသင့်တော် သလို Filter တွေ သုံးပြီး စစ်ပြီး မှ သွင်းဘို့ ပါ။ Filter တွေ ရဲ့ Efficiency ကို ASHRAE MERV Rating နဲ့ ပြနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် ကို MERV Chart မှာ လေ့လာပါ။
ASHRAE Standard 62.1 က O/A ကို အနည်းဆုံး MERV-8 အဆင့်ရှိတဲ့ Filter နဲ့ စစ်ပေးဘို့ တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။ အပြင်မှာ ရှိတဲ့ လေရဲ့ အမှုန်အမွှား ပါဝင်နှုန်း ကို လိုက်ပြီး Commercial Building အများစု သုံးကြတာ က MERV-8 နဲ့ MERV-11 ပါ။ ဆေးရုံလို အဆောက်အအုံ မျိုးမှာ တော့ ရံဖန်ရံခါ Filter အဆင့်ဆင့် ခံထားရပါတယ်။ ဥပမာ၊ ပထမ အဆင့် MERV-8 နဲ့ အမှုန်အကြီးတွေ ကိုစစ် ပြီး အန္တရာယ်ပေး နိုင်တဲ့ အမှုန်ငယ် လေးတွေ ကို စစ်နိုင်ဘို့ MERV-13 ကို ဒုတိယ အဆင့် ခံတာမျိုးပါ။
မြေပြင် နားမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ Ground Level Ozone အကြောင်းကို အရင် Clean Air မှာတင်ပြခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအိုဇုန်း က မီးခိုးမြူ smog ကိုဖြစ်စေတာရယ်၊ လူတွေ ရဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ကို အကြီး အကျယ် ဒုက္ခ ပေးနိုင်တာ ရယ် ကြောင့် လေထဲမှာ 0.08ppm (8 hour avg) or 0.12 (1 hour avg) ထက်မကျော် အောင် ဂရုစိုက်ဘို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေထဲမှာ အိုဇုန်း ဒီထက်များတဲ့ နှုန်းနဲ့ ပါလာရင် carbon filter နဲ့ စစ်ပေးရပါတယ်။
Ventilation rate နဲ့ပတ်သက်ပြီး အသင့်တော် ဆုံး မှီငြမ်းစရာ ကတော့ ASHRAE Standard 62.1: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ပါ။
Ventilation Rates ကို နှစ်ပိုင်း ခွဲထား ပါတယ်။ ပထမ တစ်ခု က ရှိနေနိုင်တဲ့ လူတွေ အတွက် ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ ကတော့ အဆောက်အအုံ (ဥပမာ၊ ကော်ဇော) က ထွက်လာမဲ့ contaminants အငွေ့ တွေ ကို အားပျော့ စွန့်ထုတ် သွားစေ ဘို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Ventilation Rates= Occupancy+ Area Factors
အသုံးများတဲ့ Occupancy density နဲ့ လိုအပ်မဲ့ ventilation rate တွေကို စာရင်းပြုထားပါတယ်။ စာအုပ် (သို့) pdf download ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဈေးအတော်အတန် ကြီးပေမဲ့ ဖတ်ရုံသက်သက် ဆိုရင်တော့ Free Online Preview လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပေးထားတဲ့ Rate တွေ က အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက်ပါ။ LEED® ကတော့ လိုအပ်ရင် ASHRAE 62.1 ထက် 30% အထိပိုပေးနိုင်အောင် ဒီဇိုင်းလုပ်ဘို့ တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
အနံ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆောက်အအုံ ထဲကို ပထမ ဆုံး ဝင်လာခါစ အခြေအနေ မှာ သတိထားမိကောင်း ထားမိ စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေရဲ့ သဘာဝ အရ ဝင်လာသူ ထဲက ၈၀% လောက်က ၆ မိနစ် အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ နေသား ကျသွား လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနံ့က အရေးပါတဲ့ နေရာတွေ မှာ တော့ လိုအပ်သလို ဒီဇိုင်းလုပ်ဘို့ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ။ ။စတိုးဆိုင် လိုမျိုး၊ Customer က အနံ့ပြင်းရင် အထဲဝင်ချင်မှ ဝင်ချင်မယ်။ ဝင်ရင်တောင် မှ ခပ်မြန်မြန် လိုသလောက် နည်းနည်းပါးပါး ပဲ ဝယ်ပြီး ပြန်ထွက် သွားချင် သွားမယ်။
အဆောက်အအုံ က ရေကို ကုန်စင်အောင် စွန့်ထုတ်နိုင်ဘို့၊ ရေမခိုစေ နိုင်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
HVAC Maintenance အတွက် Access က မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
12.8°C (55°F) Dew Point က 65%RHupper Limit ထက်ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။
Commissioning, Documentation & Maintenance တွေ လည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ Ventilation System တွေရဲ့ performance စွမ်းဆောင်ရည် အမြဲကောင်းနေအောင် လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေး ထိန်းသိမ်းမှု ရှိ နေမှ ဖြစ်မှာ မဟုတ်လား။
Local Codes: လိုအပ်ချက် တွေ က လည်း အနည်းဆုံး ပေးရမဲ့ Ventilation rate ကို သတ်မှတ်ထားလေ့ ရှိပါသေးတယ်။ ရံဖန်ရံခါ ဆိုသလို ဒီ rate နှုန်းတွေ က ASHRAE 62.1 ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုကောင်း ပိုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မလိုက်နာ လို့ မရပါဘူး။
Singapore: CP 13
Malaysia: Uniform Building Bylaw
တစ်ခု သတိပြုရမှာ ကတော့ လေကို ခြောက်သွေ့အောင် မလုပ်ပဲ သွင်းခဲ့ ရင် Mold ပြဿနာ က ရှိနေအုံးမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် Energy Recovery လုပ်နိုင်ဘို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ Dry and Cold Air ကပဲ Total energy recovery ရနိုင်တယ် ဆိုတာ ကိုလည်း သတိပြု ရပါလိမ့်မယ်။
Ventilation rate နဲ့ပတ်သက်ပြီး US မှာ ရုံးခန်း အဆောက်အအုံ Office Buildings တွေ 510 လုံး ကို လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါ မှာ အဆောက်အအုံ အများစု ASHRAE 62 က လိုအပ်တာထက် အများကြီး ပိုနေတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
Outdoor Air Filter တွေကို လစဉ် အသစ်လဲပေးပါ။
O/A damper တွေရဲ့ Position နဲ့ Operation ကို သုံးလတစ်ခါ စစ်ဆေးပါ။
O/A sensor တွေ ကို ၆ လ တစ်ကြိမ် re-calibrate (စံချိန်ကိုက်အောင် မှန်အောင် ချိန်၊ ညှိ) လုပ်ပေးပါ။ Humidity Sensor တွေ က ရက်သတ္တပါတ် အချို့အတွင်း မှာတင် accuracy တိကျမှု ±5% RH ကနေ ±15% RH ရောက်အောင် ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ပါတယ်။
Coil, Drain Pans နဲ့ damp duct interior တွေကို တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။
Minimize exterior glazing, install low-e glass and shade it.
နေရောင် တိုက်ရိုက် (Direct) (သို့) သွယ်ဝိုက် (Diffuse) ဝင်လာနိုင်တဲ့ မှန်တွေ ကို လျှော့ချပါ။ Heat transfer နည်းတဲ့ low-e glass ကိုသုံးပါ။ အရိပ်ရအောင် Shade လုပ်ပေးပါ။
Avoid West facing glazing (အနောက်ဖက် မျက်နှာမူတဲ့ မှန်) တွေ ကို ရှောင်ပါ။
Design glazing to allow daylighting of perimeter. နေ့ပိုင်း မှာ perimeter (အပြင်ဘက်နှင့် နီးသော အနား ရှိ နေရာများ) မှာ နေ့အလင်းရောင် ဖြတ်ဝင်လာနိုင်မဲ့ ပုံစံဖြစ်အောင် glazing တွေ ကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပါ။ (လျှပ်စစ်မီးအသုံးလျှော့ချ နိုင်ဘို့ ပါ။ ပြူတင်းပေါက် ရဲ့ အပေါ်ဘက် Shade လုပ်ထားတဲ့ အမြင့် နေရာ က အသင့်တော် ဆုံးပါ။ နေရောင်ရဲ့ အပူ ကို လှိမ့်ဝင် မလာအောင် ထိန်းပေးနိုင်သလို အလင်းရောင် ကိုလည်း အတွင်းပိုင်း ပိုရောက်အောင် ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Exterior enclosure must be air tight. အပြင်ဘက် က နံရံတွေ အကာတွေ အားလုံး က လေလုံ ဘို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ အပြင်က moisture များတဲ့ လေစိမ့်ဝင် လာလို့ ပိုမို ကုန်ကျ မဲ့ energy ကို save လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Commissioning building and systems. အဆောက်အအုံ နဲ့ Systems တွေရဲ့ Function and performance စွမ်းဆောင်ရည် တွေ ကို စနစ်တကျ စစ်ဆေး တာ ကို commissioning လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါမှ design လုပ်ထားတဲ့ အတိုင်း အမှန်တကယ် အလုပ် လုပ်မလုပ် သေချာ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Seal all ducts and plenums. Air duct တွေ Plenum တွေမှာ ယိုစိမ့်မှု တွေ ရှိနေရင် Energy ဆုံးရှုံးမှု ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လေမယို အောင် seal လုပ်ပေးရပါမယ်။
Match ventilation to building's occupancy. အထဲမှာ ရှိနေမဲ့ လူတွေရဲ့ အရေအတွက် နဲ့ လိုအပ်ချက် ကို လိုက်ပြီး ventilation ကိုပေးပါ။
Capture & re-use heat from cooling equipment & exhaust air. မသုံးရင် အလဟဿ ဖြစ်သွားမဲ့ heat တွေ၊ Cold & dry exhaust တွေ က နေ Energy ကို ဖမ်းယူပြီး ပြန်သုံးစွဲ ပါ။
Control indoor dew point temperature. အခန်းထဲ က Dew point temperature ကို ထိန်းထားပါ။
Provide ongoing-commissioning of systems. အဆောက်အအုံ လည်ပတ်နေဆဲ မှာ လည်း systems တွေ ကို ongoing-commissioning (ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေး ပြုပြင်) လုပ်ပေးပါ။
Energy Efficiency အတွက် လက်ရှိ အကောင်းဆုံး မှီငြမ်းစရာ ကတော့ ASHRAE 90.1 ပါ။ သူ့ကိုလည်း Free Preview တစ်အုပ်လုံး သွား ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ASHRAE Publications [http://www.ashrae.org/publications/page/1285] ကိုသွားပြီး Preview Popular ASHRAE Standards ကိုရှာပါ။
စာဖတ်သူ အနေ နဲ့ ဒီ့ထက် ပိုပြီး လေးလေးနက်နက် သိချင်ရင် တော့၊ ဝယ်ယူဖတ်ရှု ပါ (ဒါမှမဟုတ်) ကုမ္ပဏီ ကို ဝယ်ခိုင်း ပါလို့။
ASHRAE က ကမကထ ပြုပြီး သုံးလတစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေနေ တဲ့ မဂ္ဂဇင်း ပါ။ နည်းပညာ အသစ်တွေ နဲ့ Energy-efficient design and Operation တွေ ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ကို Decision maker တွေ နဲ့ Building community တွေ သိရှိနားလည်အောင် လေ့လာနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေဘို့ ရည်မှန်းပါတယ်။ Sustainability movement ထဲ က စံပြ အဆောက်အအုံ တွေ ကို လေ့လာ တင်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ASHRAE Website မှာ ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုပဲ အလကား (Free) Download လုပ်ယူပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Advanced Energy Design Guides Free Download
Building Energy အသုံး ကို လျှော့ချနိုင် ဘို့ Advanced Energy Guide Series ကို ထုတ်ထားပါတယ်။ လူတွေ ဆီ ရောက်လေ ကောင်းလေ မို့ ASHRAE Website မှာ ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုပဲ အလကား (Free) Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ ထုတ်ဝေပြီးတာကတော့
နောက်ဆက်လက်ထုတ်ဝေ ဘို့ ပြင်ဆင်နေတာ တွေ ကတော့
ASHRAE Publications [http://www.ashrae.org/publications/page/1285] ကိုသွားပြီး Preview Popular ASHRAE Standards ကိုရှာပြီး လေ့လာပါ။
ASHRAE Online Learning က Short Courses ထဲ မှာ ASHRAE 55 ကနေထုတ်နုတ် ထားတဲ့ HVAC Systems: Thermal Comfort (I-P) ကို Free ပေးထားပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ပေးစရာ မလိုပဲ Free လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
HVAC Systems: Introduction to Design
[ http://chawlwin.blogspot.com/2008/10/hvac01design.html ]
[ http://www.ashrae.org/publications/ ]
ASHRAE Online Learning : Look for Short Courses: HVAC Systems: Thermal Comfort (I-P)
[ http://www.ashrae-elearning.org/catalog.php ]
[ http://openpub.realread.com/rrserver/browser?title=/ASHRAE_1/ashrae_62_1_2007_1280 ]
ASHRAE MERV Rating
[ http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_Efficiency_Reporting_Value ]
MERV Chart[ http://www.pureairsystems.com/103_2.html ]
Clean Air [ http://chawlwin.blogspot.com/2009/01/clean-air.html ]
Free Preview [ http://www.ashrae.org/publications/page/1285 ]
High Performing Buildings [ http://www.hpbmagazine.org/ ]
[ http://www.ashrae.org/publications/page/1604 ]
Posted by Ko Chaw - ကိုချော at 10:09 AM Labels: Environment, HVAC, Singapore
Dear Ko. Chaw,
Please kindly guide to us, how to get ASHRAE Member.
I will publishashort article in May 2009..